မကြာမီအချိန်မှာ Vivo က ဘယ်လိုရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ Launching Event ကို ကျင်းပမှာလဲ – DigitalTimes.com.mm
65 Shares 69 Views
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ Vivo ရဲ့ V7+ က လူပြောသူပြော များနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် FullViewTM Display ကို စိတ်ဝင်စားနေကြတာပါ။ V5 နဲ့ အရွယ်အစားချင်း တူပေမယ့် မျက်နှာပြင်က ပိုပြီးကျယ်ပြန့်လာတဲ့အတွက် စိတ်ဝင်စားနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်မှာ V5 ရဲ့ 20MP Softlight ကို အကြိုက်တွေခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့ V7+ ရဲ့ ကင်မရာက ဘယ်လောက်ထိ ပိုကောင်းလာမှာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းအတွက်အဖြေက Launching Event မှာမှ သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က Function တွေ ဘယ်လိုတိုးတက်လာမှာလဲ? Finger print ကို ကျောဘက်ပို့ပြီး မျက်နှာပြင်ချဲ့ထားတဲ့ V7+ရဲ့ Navigation bar မှာရော ဘယ်လို ဆန်းသစ်မှုတွေ ဖြစ်လာမှာလဲ? Hi-Fi audio စွမ်းရည်ကရော ဘယ်လိုတိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှာလဲ? မေးခွန်းတွေအားလုံးရဲ့ အဖြေကို ယခုနေ့လယ်မှာ သိရပါလိမ့်မယ်။
Vivo က ဒီနေ့ နေ့လယ် Novotel Hotel Yangon Ballroom မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် Launching Event ကို အရင်တုန်းက လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပွဲတွေထက် ပိုပြီး ကြီးကျယ်ခမ်းနားအောင် စီစဉ်ထားတယ် ဆိုတာကတော့ မီဒီယာတွေအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီပွဲကိုတက်မတက်ရောက်ခင်မှာပဲ Vivo က ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အခင်းအကျင်းအချို့ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရလို့ပါပဲ။
ဒီတော့ နေ့လယ်ပိုင်းမှာ မိတ်ဆက်တော့မယ့် V7+ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အားလုံးသိချင်နေကြတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ စောင့်မျှော်ကြည့်ကြပါလို့ ပန်ကြားလိုက်ရပါတယ်။